"Izao no lazain'i Jehovah, Izay nahary anao... : ... Izaho Jehovah no Andriamanitrao... Malala eo imasoko ianao, eny, ... tiako." Isaia 43:1,3, 4
Nahoana aho no eto? Inona no tanjon'ny fiainako? Tsy maintsy mipoitra ireo fanontaniana ireo, indray andro any, eo amin'ny fiainantsika.
Aiza no hahitana valiny?
Ao amin'ny Baiboly: ao Andriamanitra dia maneho ny tenany ho Ilay Tompo-marika sy Mpanao izao rehetra izao (Hebreo 11:10). Izy izany no loharanon'ny aina. Fantatro fa eto aho satria noarìn'Andriamanitra, notiaviny, novolavolainy tao an-kibon-dreniko tamin'ny fomba "mahatahotra sy mahatalanjona" (Salamo 139:14). Noarìny tahaka ny endriny aho (Genesisy 1:27), noarìny ho voninahiny (Isaia 43:7). Tsy kisendrasendra jamba no nampisy ahy, fa noho ny sitrapon'Andriamanitra sy ho fiderana Azy: "Ianao, Tomponay sy Andriamanitray, no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery ; fa Ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy" (Apokalypsy 4:11).
Tokony hanontany tena ny tsirairay hoe: raha izany no tanjon'ny fiainako, tsara ve izao itondrako azy izao? Ahoana ny fomba fiainako hatramin'ny androany? Iza moa Andriamanitra, amiko?
Azoko hamavoina ve "ny harenan'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny fahari-pony" (Romana 2:4)? Mbola holaviko hatrany ve ny fitiavan'Ilay Andriamanitra Tsitoha? Te hanome dikany ny fiainako Izy, izany hoe te hanome ny fahasambarana satria vita fihavanana aminy sy ny fahafahana manome Azy isanandro ny voninahitra mendrika Azy. Dia hidify fotsiny izany fikasan-dehibe izany ve aho?